३३ औं कन्भेन्सन गर्ने भए पूर्ब कन्भेन्सनहरुको आम्दानी खर्च देखाउ | www.sidhakurausa.com
३३ औं कन्भेन्सन गर्ने भए पूर्ब कन्भेन्सनहरुको आम्दानी खर्च देखाउ
एसोसिसन अफ नेपलिज इन द अमेरिकाज (एएनए) को ३३ औं कन्भेन्सन क्यालिफोर्नियाको लस एन्जलसमा कन्भेसन अध्यक्ष तथा एएनए उपाध्यक्ष डा. शम्भु ढुंगानाको मातहतमा रहने गरी कन्भेनर डा. जीत जोशीले आगामी जुलाई ३ देखि ५ सम्म आयोजना गर्ने निधो गर्दै हिजोआज फेसबुकबाट डा. ढुंगानाले कन्भेन्सनको प्रचार प्रसार गरी रहेका छन ।
एएनए कन्भेन्सन आयोजना गर्नु पर्छ र सारा नेपालीहरुलाई मापसेको तालमा उफार्नु पर्छ जुन एएनएको धनि परम्परा हो । एएनए कन्भेन्सन आयोजना गर्नु हुँदैन भनेर कसैले भन्न सक्दैन । तर के का लागि एएनए कन्भेन्सन आयोजना गर्दै ल्याईएको छ भन्ने प्रश्नको जबाफ अनुत्तरित छ । २८ औं बोस्टन कन्भेन्सनदेखि ओरालो लागेको एएनएको गति सुस्त मात्र भएको छैन, नेपालीहरुको बिस्वास पनि यसले गुमाउदै गएको छ ।
सामाजिक संघ संस्थाप्रति आम समाजसेवीहरुको बिस्वास र भरोसा गुम्दै जानुको पछाडी केहि गुह्य कुरा अबस्य लुकेको हुन्छ । एएनए प्रति आम रुपमा जनबिस्वास गुम्नुमा व्यक्तिको पनि हात छ । सिमित संख्याका आजिबन सदस्यहरुको मनोमानी एकातिर जिम्मेवार छ भने अर्कोतिर बिगत ४ बर्षदेखि यसको नेतृत्व गर्दै आउने व्यक्ति कुख्यात र नेपाली बिरोधि भएका कारण एएनएको शाख गिर्दै गएको हो ।
एएनएमा आफु ए ग्रेडको समाजसेवी देखिन चाहने व्यक्तिले अर्थ अपचलन लगायतका बद्नामपूर्ण काम गरेका कारण पनि एएनएप्रतिको आम बिस्वास टुट्दै गएको हो । मुख्यतया एएनएको आर्थिक पारदर्शिता पटक्कै छैन । ५०१ सी अन्तर्गतको नाफा रहित संस्थाले आर्थिक हिसाबकिताब पारदर्शीपूर्ण ढंगले वेब साइटमा राखेर सदस्य तथा गैर सदस्यहरुको मन जित्ने काम कहिल्यै गरेन ।
सन २०१० को बोस्टन कन्भेन्सन, सन २०११ को भर्जिनिया कन्भेन्सन, सन २०१२ को टेक्सास कन्भेन्सन, सन २०१३ को न्युयोर्क कन्भेन्सन, सन २०१४ को डिसी कन्भेन्सन र सन २०१५ को भर्जिनियाको मिटिंग अफ द माइन्ड्सको आर्थिक पारदर्शिता स्पस्ट पार्ने काम एएनएको कुनै पनि बोर्डबाट देखिएन । पूर्ब अध्यक्ष सिमोन ढुंगाना, अन्तरिम अध्यक्ष छेवांग शेर्पालामा र बर्तमान अध्यक्ष रजर अधिकारीको समेत आर्थिक पारदर्शिताको बिषयमा आँखा खुलेको छैन ।
५ बर्षमा ५ वटा कन्भेन्सनहरु भए कुन कन्भेन्सनमा कति आम्दानी खर्च भयो त्यो हेर्ने र जान्ने कहाँबाट? कति रकमको चलखेल भयो त्यो थाहा पाउने कहाँबाट? यी र यस्ता सयौं कारोबारहरु भएका छन ५ वटा कन्भेन्सन र मिटिंगमा तर त्यो सबको आर्थिक पारदर्शिता कसरी देख्न सकिन्छ? सदस्यहरुले कसरी देख्न सक्छन? गैर सदस्यहरुले कसरी देख्न सक्छन?
आर्थिक अपारदर्शी संघ संस्थाको कार्यक्रम, कन्भेन्सन, मिटिंग वा सभा, सेमिनारमा भाग लिनु भनेको उनीहरुको अपारदर्शितालाई आँखा छोपेर सघाउनु होइन? हिजो ढुंगाना र शेर्पालामाको पालामा एकतन्त्रीय शाशन भयो, अप्रजातान्त्रिक भयो, अपारदर्शी भयो भनेर न्यायको पक्षमा लड्ने, सुशाशनको माग गर्ने र गलतलाई कार्यबाही तथा असललाई सम्मान गर्ने हेतुले संगै हिंडेका मित्रहरु अहिले किन तितरबितर भए? यो प्रश्नको जबाफ अध्यक्ष अधिकारी, उपाध्यक्ष डा. ढुंगाना र कोषाध्यक्ष डा. गम्भीर श्रेष्ठले सबैका सामु प्रस्ट्याउनु जरुरी छ ।
आर्थिक पारदर्शिता पहिलो सर्त हो । ल, देहायका आम्दानी खर्चको विवरण सार्बजनिक गर्नुहोस:
१) माथि उल्लेखित ५ वटा कन्भेन्सन तथा मिटिंगको आम्दानी खर्चको विवरण र एएनएको वेब साइटमै राखेर सबैको पहुँचमा ल्याउनुहोस,
२) पूर्ब अध्यक्ष ढुंगानाको पालाका कोषाध्यक्ष उत्सब गुरुङले अन्तरिम अध्यक्ष शेर्पालामाको कोषाध्यक्ष वा अर्थ अधिकारी लक्ष्मण प्रधानलाई बुझाएको हिसाब किताब र लक्ष्मण प्रधानले डा. गम्भीर श्रेष्ठलाई बुझाएको हिसाब किताब,
३) अहिलेसम्मको सबै बैंक स्टेटमेन्टहरु,
४) बझाङ्ग स्कलरशिप फण्डका संस्थापक तथा एएनए सुचना निर्देशक डा. तुलशी जोशीबाट अन्तरिम अध्यक्ष शेर्पालामाले जबर्जस्ति लिएको २८ हजार डलरको हिसाब किताब, एएनएको कुन बैंक खातामा त्यो रकम जम्मा गरिएको थियो? त्यसको बैंक स्टेटमेन्ट,
५) राम प्रसाद खनालको नेपाल मदर डट कम भित्र समाबेस गरेर एएनएको नाममा चलाईएको मुद्दाका १२ जना प्रतिवादीहरुबाट शेर्पालामाले अदालत बाहिर कागज गराएर तिराएको रकम एएनएको कुन बैंक खातामा कति जम्मा गरेको थियो? त्यसको आम्दानी खर्च, बैंक स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट,
६) न्युयोर्कको ३१ औं एएनए सम्मेलनको दौरानमा शेर्पालामाले गठन गरेको एएनए नेपाल परियोजनाको कागजपत्र र अनधिकृत रुपमा नेपाल निकासी गरेको १२ हजार डलरको हिसाब किताब,
७) २८ औं बोस्टन कन्भेन्सनमा भएको ८४ हजार ३ सय ७७ डलर घाटाको ३० प्रतिशतले हुन आउने रकमको पूर्ति तत्कालिन जीबीएनसी अध्यक्ष मिलन गुरुङले अन्तरिम अध्यक्ष शेर्पालामालाई बुझाएको भनिएको त्यो रकमको हिसाब किताब,
८) दर्जनौं नेपालीहरुलाई मुद्दा हालेर अन्तरिम अध्यक्षले तलब ख्वाउदै पालेका वकिल अकिन डिपोलाई बुझाएको कूल भुक्तानीको हिसाब किताब, एएनएको कुन बैंक खाताबाट त्यो भुक्तानी भएको थियो त्यसको बैंक स्टेटमेन्ट,
९) अर्का अकिल ह्यारी सुइसालाई बुझाएको कूल भुक्तानी रकमको हिसाब किताब, कुन बैंक खाताबाट कसरी भुक्तानी भएको थियो? त्यसको बैंक स्टेटमेन्ट,
१०) दर्जनौ व्यक्तिहरुबाट एएनएको खातामै जम्मा नगरी मुद्दा लड्न आजिबन सदस्य श्रीधर कंडेलले उठाएको कूल रकम कति थियो? त्यसको हिसाब किताब,
११) ४ वटा मुद्दा खेप्नेले बुझाएको १ हजार डलर सहयोग राशिको हिसाब किताब, कुन बैंक खातामा जम्मा गरिएको थियो त्यो रकम? त्यसको बैंक स्टेटमेन्ट,
१२) एएनएको २८ औं कन्भेन्सनको घाटा कसरी परिपूर्ति भयो? त्यसको जानकारी,
१३) एएनएको २९ औं भर्जिनिया कन्भेन्सन, ३० औं टेक्सास कन्भेन्सन, ३१ औं न्युयोर्क कन्भेन्सन, ३२ औं डिसी कन्भेन्सन र सन २०१५ को मिटिंग अफ द माइन्ड्सका कन्भेनरहरु क्रमश: हेमन्त श्रेष्ठ, पासाङ्ग लामा, समिर महर्जन र मेदिनी अधिकारीले बुझाएको नाफा/घाटा सम्बन्धि आम्दानी खर्च विवरण
१४) एनईसिसिको बिल्सभिलको प्रपर्टी १ मिलिएन डलरको भयो भनेर नाक फुलाउने अध्यक्ष खिलेन्द्र न्यौपाने लगायतका व्यक्तिहरुले लह्नमको प्रपर्टी बेच्दा र बिल्स भिलको प्रपर्टी किन्दा हात लगाएको कमिशन तथा डीड ट्रान्सफर गर्दा वकिल अकिन डिपोलाई बुझाएको ज्यालाको विवरण
यी र यस्ता खर्चहरु प्राय सबैलाई जानकारी भएकै बिषय हुन । अझ कति जानकारीमा नरहेका खर्च र आम्दानी कोषाध्यक्ष डा. गम्भीर श्रेष्ठले पूर्ब अर्थ अधिकारी प्रधानसंग बुझ बुझारथ गरेको हुनुपर्छ । के के बुझ बुझारथ भएको छ? त्यो सबै यथार्थ जानकारी एएनएको वेब साइटमा राख्न र सदस्य तथा गैर सदस्यहरुलाई स्पस्ट देखाउन सीधाकुरा अध्यक्ष अधिकारी, उपाध्यक्ष डा. ढुंगाना र कोसाध्यक्ष डा. श्रेष्ठलाई सुझाउँछ ।
यावत आर्थिक श्रोत र खर्च मिलान नगरी, आर्थिक पारदर्शिता नदर्शाई एएनएले कुनै पनि हालतमा अर्को कन्भेन्सन गर्न सक्दैन । ५ बर्षदेखि आर्थिक रुपमा भ्वांग परेको एएनएले अब फेरी कसलाई डुबाउन अर्को कन्भेन्सन गर्ने? स्मरण रहोस राम प्रसाद खनाल लगायत १ दर्जन व्यक्तिहरुलाई भुक्तानी दिएको २८ औं कन्भेन्सनका बाउन्स भएका चेकहरुका लफडाहरु अझै सल्टिएको छैन ।
यस्तो अपारदर्शी संस्थाले अमेरिकाको नेपाली समाजमा एउटा गतिलो उदाहरण बनेर देखिनै आँटेको श्री पशुपतिनाथ फाउन्डेसनलाई भजाउन उपाध्यक्ष डा. ढुंगाना र कन्भेनर डा. जोशीले फाउन्डेसनका अध्यक्ष भक्त थापा, उपाध्यक्ष ऋषि ढकाल र कोषाध्यक्ष एक राज पाण्डेसंग गोप्य सम्झौता गरेर लस एन्जलसबासी नेपालीहरुलाई डुबाउने प्रपन्च गरिरहेका छन ।
फाउन्डेसनका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षले एएनएका उपाध्यक्ष र कन्भेनरसंग के कस्तो लिखित सम्झौता गरेका हुन त्यो सार्बजनिक नगरी एक स्टेप अगाडी बढ्न मिल्दैन । आर्थिक रुपमा एएनए अपारदर्शी मात्रै छैन, प्रशाशनिक रुपमा पनि सम्झौता लुकाएर अघि बढ्न उद्दत छ, फाउन्डेसनका प्रत्येक सदस्यले त्यो गोप्य सम्झौताको पर्दाफास नगरी हुन्न ।
पर्सि आइतबार डा. ढुंगानाले फाउन्डेसन परिषरमा एएनए कन्भेन्सन सम्बन्धि बैठक राखेका छन, त्यो बैठकमा फाउन्डेसनका सबै सदस्यहरु, दाताहरु उपस्थित भएर त्यो गोप्य सम्झौता पत्र बाहिर निकाल्न जरुरी छ । यदि त्यो गोप्य पत्र बाहिर निकाल्दैनन भने उनीहरुको राजिनामा माग्नुको बिकल्प छैन । एएनए आफु पनि भासमा जाकिएको छ, अब फाउन्डेसनलाई पनि त्यहि भासमा जाक्न उद्दत देखिन्छ, यो कुनै पनि हालतमा दाताहरुको लागि सह्य कुरा होइन ।
आगामी नोभेम्बरमा फाउन्डेसनले बैंक ऋण चुक्ता गर्नु पर्ने हुनाले ३३ औं एएनए कन्भेन्सन आयोजना गरेर फाउन्डेसनलाई टाट फर्काउने होइन, दाताहरुबाट उठाउन बाँकी रकम चुक्ता गर्न उनीहरुलाई अभिप्रेरित गर्नु चाहि मुख्य कुरा हो । एएनएको लफडा, आर्थिक घाटा र बदनामीको सहयात्री फाउन्डेसन बन्ने होइन भन्ने कुरा सारा लस एन्जलसबासीहरुले बुझ्न जरुरी छ । कन्भेन्सनका अध्यक्ष र कन्भेनर एक दाम नहाल्ने सारा लस एन्जलसबासी मुर्गा बन्न ३३ औं कन्भेन्सन आयोजना गर्नुको अर्थ छैन, यदि छ भने बिगत ५ बर्षदेखिको एएनएको आर्थिक लफडा पारदर्शी पहिले होस ।